राष्ट्रिय खेलाडी बन्न चाहने बालकाशी भईन् म्युजिक भिडियोको ‘पूर्ण प्याकेज’ - Parichay Network
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ५ चैत्र २०७६, बुधबार १६:१४ मा प्रकाशित
बिनिता सुनार –
लमजुङको क्होला सोंथर गाउँपालिका वडा ७ कुम्लुङमा जन्मिएकी बालकाशी गुरुङलाई कलाकारीता क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने योजना नै थिएन । तर उनी आफ्नो योजना र भविष्यको लक्ष्य नै नभएको पेशामा रमाइराखेकी छिन् । आठ कक्षा पढ्दासम्म उनी रेडियो बाहेक अन्य सञ्चारका माध्यमको पहुँचबाट समेत टाढै थिइन् ।
बनस्थलिय माध्यमिक विद्यालयबाट ८ पास गरेकी उनी ९ पढ्न पोखरा झरिन् । तबमात्र उनले पहिलो पटक टि.भी देखिकी थिइन् । त्यो पल सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘रेडियो नेपाल बाहेक अन्य सञ्चार माध्यम मैले देख्न पाएको थिइन् । पढ्नको लागि जब पोखरा आएँ, पहिलो पटक टिभी देखेको हो ।’ उनले २०६२ सालमा अमरसिंह मा.विबाट एस.एल.सी. पास गरिन् । अमरसिंहबाट एसएलसी पास गरेकी बालकाशीले प्लस टु भने कालिका बहुमुखीबाट गरेकी हुन् ।
केटी भएपनि बालकाशी सानैदेखि केटा स्वभावकी थिइन् । गुच्चा खेल्ने, खोलातिर माछा मार्न जाने, फुटबल, भलिबलप्रति उनको झुकाब बढी थियो । कला क्षेत्रमा भन्दापनि उनलाई खेलतर्फ निकै चाख लाग्थ्यो । बालकासीलाई राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने ठुलो इच्छा थियो । उनी भन्छन्, ‘मलाई राष्ट्रिय खेलाडी बनेर चिनिने रहर थियो । परिवारको साथ पाइन् आश मार्नु प¥यो ।’ केटी मान्छे त्यसमा पनि खेलकुद ? भन्न थालियो ।’ सबैको यस्तै प्रश्नले खेलप्रति उनको मन मर्दै गयो ।
अभिनयमा इन्ट्री :
बालकासीको लागि अभिनय फरक कुरा थियो । सानैदेखि खेलकुदमा रमाएकी उनलाई अभिनयतिर लाग्छु भन्ने मस्तिष्कमा कहिल्यै आएन । जब गुरुङ फिल्मको लागि अफर आयो, उनमा अभिनयतर्फ इच्छा जाग्दै गयो । उनी भन्छिन्, ‘जीवनमा उमेरसँगै इच्छाहरु पनि परिवर्तन हुँदै जाने रैछ । त्यहि भएर अभिनय गरुँ–गँरु जस्तो लाग्यो ।’
२०६४ सालमा उनलाई ‘आक्रादो’ नामक गुरुङ फिल्मबाट अफर आयो । भोजबहादुर गुरुङले निर्देशक गरेको चलचित्रबाट उनले अभिनय क्षेत्रमा पाइला टेकेकी हुन् । लमजुङको बिकट गाउँ सिऊरुङमा छायाँकन गरिएको आक्रोदोबाट उनले धेरकोै मन जितेकी थिइन् । छायाँकनको क्रममा फिल्म क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरुसँग बालकाशीको भेटघाट बढ्दै गयो । यसका साथै फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गराएका निर्देशक भोजबहादुर गुरुङसँग उनको विवाह पनि भयो । भोजबहादुरकै प्रस्तावमा उनीहरुको विवाह भएको थियो । हाल भोजबहादुर र बालकासीका दुई छोरा पनि छन् ।
बालकासीले हालसम्म आक्रोदो र मौरीमा गरी दुईवटा गुरुङ फिल्म र साहसी, भालेफाइट, हमजाएगा लगायतका नेपाली फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । यतिमात्र नभई केहि म्युजिक भिडियोहरुमा पनि उनको अभिनय देख्न सकिन्छ । झट्ट हेर्दा गुरुङ जस्ती नदेखिने बालकासीले गुरुङ फिल्मबाट धेरैको मन जितेकी छिन् ।
अभिनयदेखि निर्देशक :
शिक्षा बिषय लिएर स्नाकोत्तर अध्ययन गरेकी बालकासीले आफुलाई कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराइसकेकी थिइन् । यतिमात्र नभई चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा सक्रिय उनको सपना यतिमा मात्र सिमित रहेन । अभियनसँगै बालकासीलाई निर्देशकतिर झुकाव बढ्यो । उनी भन्छिन्, ‘मलाई कलाकारिता क्षेत्रमा नै केहि गर्नु थियो । जसकारण अभिनयमा मात्र सिमित हुन चाहिँन् ।’
डिजिटल मार्केट, पोष्ट प्रोडक्सन लगायतका हरेक कामहरु आफुैले सिक्न पाए भन्ने ईच्छा उनको मनमा सधैजसो आउने गथ्र्थाे । जसकारण उनलाई प्राविधिक क्षेत्रमा केहि गर्ने आँट आयो । सुटिङ्गको क्रममा भिडियो, फोटेग्राफी, इडिटिङ, कलरिङतर्फ उनले निकै चाख मानेर हेर्ने गर्थिन् । ‘अभिनयसँगै मेरो ध्यान क्यामरातिर पनि हुने गथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछि–पछि जति भोक अभिनयमा थियो, त्यतिनै पोष्ट प्रोडक्सनका काममा पनि हुन थाल्यो ।’
बालकासीले निर्देशन गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरु बजारमा आइसकेका छन् । आफुले निर्देशन गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो सम्झिदै उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा एकदम डर लागेको थियो । अरुको काम हेर्दा मात्र सजिलो देखिन्थ्यो, तर हुँदैन रहेछ ।’ ‘निर्देशन गर्ने काम सोचेभन्दा निकै गाह्रो थियो, तर केहि गर्छु भनेर गएपछि आँट आफै आउने रहेछ,’ उनले भनिन् ।
बालकासीको अनुभव अनुसार गुरुङ फिल्ममा राम्रो भविष्य छ ।समय र प्रबिधिसँगै आफु पनि परिवर्तन हुन सकियो भने फिल्म क्षेत्रमा सफलता पाउन सकिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘सबैको हेर्ने दृष्टि फरक–फरक हुन्छ । तर गुरुङ चलचित्रकर्मी बनेर बाँच्न निकै सहज छ ।’